संसदभित्रै यस्तो का’ण्ड घटाएपछि सांसद गंगा चौधरी फेरि भाइरल, सबै चकित — Imandarmedia.com
संसदभित्रै यस्तो का’ण्ड घटाएपछि सांसद गंगा चौधरी फेरि भाइरल, सबै चकित
काठमाडौ। नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी फेरि भाइरल भएकी छन् । सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै रोष्टममै उक्लि खोजेपछि भाइरल भएकी हुन् । यसअघि जनता समाजवादीकी सांसदहरुले हिन्दा भाषणा गर्दा रगत उम्लिने अभिव्यक्ति दिएपछि भाइरल भएकी थिइन् । संसदमा नाराबाजी गरेको नेकपा एमालेकी सांसद चौधरी रोष्टममै उक्लिने प्रयास गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद बैठकलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न भूमिका खेलिदिन सत्तारुढ दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गरेका छन् । बुधबार बसेको संसदको तेस्रो बैठकमा खाणले अध्यादेश पेश गरेलगत्तै सभामुखले २५ भदौसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका छन् ।
यसअघि नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।सभामुख सापकोटाले एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई निर्णय प्रक्रियामा नलगेको भन्दै बैठक सुरु भएलगत्तै अवरोध गरेको थियो।
अवरोधपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थागित गरिएको थियो । १५ मिनेटपछि बसेको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदले अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका थिए । एमाले सांसदले नाराबाजी नरोकेपछि उनले मागमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संसद संचालनमा सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गरेका थिए ।
उनले संविधान, नियम र कानुन अनुसार चल्न आग्रह गर्दै बैठक संचालन गर्न अनुरोध गरेका थिए । अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सभामुखको विरोध गर्दै बैठक चल्न नदिएकाले चालु अधिवेशन सहज नहुने देखिएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार दिउँसो सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाई अत्यावश्यक विधेयकहरु, अध्यादेशहरु पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले संसद बैठक सहज ढंगले संचालन हुने वातावरण बनाई दिन सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । अत्यावश्यक विधेयक र अध्यादेशहरू पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले संसद बैठकलाई सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाई दिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नु भएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सदन संचालनसम्बन्धि विषय हो । सदनलाई सूचारु रुपले संचालन गर्नुपर्छ । अध्यादेशहरू छ, अर्जेन्ट अध्यादेशहरू छ । अत्यावश्यक विधेयकहरु छन । त्यसकारणले गर्दाखेरी अव सत्तापक्ष, विपक्ष सबै मिलेर सदन चलाउनुपर्ने आवश्यक्ता हो । अन्तरबस्तुमा विमति हुन सक्छ । तर विधिमा, प्रक्रियामा, सिष्टममा सहमती गरेर जाउ भनेरै सबैसँग आग्रह गरेर सदन सन्चालनलाई सहज बनाउनलाई भूमिकामा खेल्नु प¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहीँ आग्रह गर्नु भएको छ ।’
सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरुले भने सदन चलाउने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सोही पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसद बैठकमा सरकारले तत्काल पारित गर्नुपर्ने अध्यादेश, विधेयकहरु बारे जानकारी गराएका थिए ।
संघीय संसदको संयुक्त अधिवेशन प्रारम्भ हुनासाथ बुधबार अपरान्ह ४ बजेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोध गरे । सभामुखले एमाले फुटाएको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै रोष्टम घेराऊ गरेर प्रतिपक्षी सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गरे । एमाले सांसदहरुको माग थियो, पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ सांसदको पदमुक्ति सम्बन्धी सूचना सभामुखले किन टाँस नगरेको ? एमाले फुटाउन सभामुखले किन भूमिका खेलेको ?
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले करिब ७ मिनेट बोलेपछि एमाले सांसदहरुले संसद बैठक अवरुद्ध पारेका हुन् । विपक्षीले नाराबाजी गरिरहँदा सभामुखले चाहिँ एमाले सांसदहरुलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ का विभिन्न खण्डहरु अध्ययन गर्न पटक–पटक आग्रह गरे । सभामुखले एमाले सांसदहरुलाई नियमावलीको नियम र खण्डहरु सम्झाउँदै ध्यानाकर्षण गराए ।
शुरुमा एमाले सांसदहरु जति आक्रामक देखिएका थिए, सभामुख पनि त्यस्तै कडारुपमै प्रस्तुत भएका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले झन झन् चर्का नारा लगाउन थालेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन भएको घोषणा गरे र एमालेका प्रमुख सचेतक, सचेतकसँग अनौपचारिक वार्ता शुरु गरे ।
पहिलोचोटिको बैठक स्थगित भएर १५ मिनेटपछि शुरु हुनासाथ पुनः नाराबाजी शुरु भयो । पहिलेभन्दा अलि नरमक देखिएका सभामुखले पुनः १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गरे । यस्तै गलफत्तीका बीच शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो ।
संसदमा देखिएको त्यो दृश्य
संसदमा राष्ट्रिय धुन बजिसकेपछि सभामुख सापकोटाले दुबै सदनको अधिवेशनसम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ भएको घोषणा गरे । सभामुखले संसद अधिवेशन उदघाटनसम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर सुनाउञ्जेल प्रतिपक्षी बेञ्चमा एमाले सांसदहरु शान्तसँग बसिरहेका थिए । तर, राष्ट्रपतिको पत्र वाचनपछि हंगामा शुरु भइहाल्यो ।
संसदमा एमालेको नारा : सभामुख मूर्दावाद ! राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढिसकेपछि सभामुखले भने, ‘बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।’ सभामुख बोल्दै गर्दा प्रतिपक्षी सांसदहरु होहल्ला गर्दै उठिसकेका थिए । सभामुखले उनीहरुतिर हेर्दै भने, ‘अरु केही गरेको छैन । स्वागत गर्न त पाइन्छ होला नि । स्वागत मात्रै गरेको हो । के थियो ? भन्नोस् माननीय सदस्यहरु ।’
त्यसपछि सभामुखले एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिँदै थपे, ‘माननीय विशाल भट्टराई । समय पाँच मिनेट ।’
५ मिनेटको समय पाएका सांसद भट्टराईले करिब ७ मिनेट बोले । माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही गरेको पत्रबारे एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोगबाट जवाफ चाहेको भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘एमालेजस्तो लोकतन्त्रका लागि ७२ वर्ष संघर्ष गरेको पार्टीलाई कसैले हेप्न खोज्छ भनेर एमाले चुप लागेर बस्ने छैन ।’
सभामुखलाई एमालेले सोध्यो प्रश्न– दल विभाजनमा किन भूमिका निर्वाह गरेको ?
प्रमुख सचेतक भट्टराईले ‘सभामुखको आसनबाट हामीले यसको जवाफ खोजिरहेका छौं’ भन्दै आफ्नो मन्तव्य टुंग्याएलगत्तै एमाले सांसदहरु रोष्टमतर्फ दौडिए । उनीहरुलाई छेक्न मर्यादा पालकहरु पनि दौडिए । लगत्तै, नाराबाजी शुरु भयो ।
विपक्षीले १४ सांसदको कारबाही किन रोकेको भन्ने प्रश्नसहित नारा लगाउन थालेपछि सभामुखले भने, ‘प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानूनका आधारमा रही निर्णय लिएको हो । हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बञ्देज गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०५७ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ को प्रावधानसमेत यहाँहरुलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’
संसदको सर्वोच्चता कायम गर, संविधान विरोधी काम गर्न पाइँदैन । विधिको शासन कायम गर जस्ता नाराहरु विपक्षीले घन्काइरहेका थिए, उता सभामुखले ठूलो स्वरमा थपे, ‘नियम २१ को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म । नियम २१ को खण्ड क र ग अध्ययन गर्न ध्यानाकर्षण गर्छु ।’
नारा लगाउनेहरुले सभामुखको चेतावनीलाई कुनै वास्ता गरिरहेका थिएनन् । उनीहरु झन् ठूलो स्वरमा नारा लगाउँदै थिए । सभामुखले फेरि थपे, ‘माननीय सदस्यहरु देशमा संविधान छ, कानून छ । ऐन छ, मर्यादा बाहिर नजानु होला । संसदको मर्यादा बाहिर नजानुहोला । फेरि पनि म भन्छु, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को (नियम २१ ) खण्ड ख र ग को तपाईहरुलाई गम्भीर ढंगले आकर्षित गर्न चाहन्छु म ।’
संविधान र नियमावलीमा के छ ?
आखिर सभामुखले पटक–पटक उधृत गरेको संविधानको धारा १०५ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा के छ त ?
संविधानको धारा १०५ मा ‘बहसमा बन्देज’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर, महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पु–याएको मानिने छैन ।’
त्यसैगरी, सभामुखले ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ मा संसदमा छलफलमा भाग लिने सांसदहरूका सन्दर्भमा ‘छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्ने नियम’ शीर्षकमा बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यले ६ वटा नियमहरु पालन गर्नुपर्ने भनिएको छ–
(क) सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा ईशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने,(ख) सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, (ग) सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने, (घ) संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने, (ङ) अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने, र (च) बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने ।